Taskade: Real-Time Task Manager na Vidiyo na-arụkọ ọnụ edezi | Martech Zone
N’ọnwa gara aga, ụlọ ọrụ abụọ dị iche iche gwara m ka m jiri ụfọdụ usoro njikwa maka ọrụ anyị. Ha abuo di egwu. Tinye n'ezi okwu; ọ bụ njikwa ọrụ na-egbu m arụpụtaghị. Usoro njikwa ọrụ ga-adị mfe iji ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị otu gị rụpụta ihe. Enwere m ekele maka nhazi njikwa ọrụ dị mfe, ọ bụkwa otu ahụ Ọrụ e mere.
Gịnị bụ Taskade?
Taskade bụ ezigbo mmekorita ngwa maka echiche gị, ebumnuche gị, yana ọrụ gị kwa ụbọchị. Hazie echiche gị, mee ihe ngwa ngwa, mara ihe. Ndepụta ndenye, ndetu, ndepụta, anyị ekpuchila gị.
Taskade na-akpọsa onwe ya dị ka ihe na-agbanwe agbanwe, nke mara mma, ma na-atọ ọchị… yana ezigbo atụmatụ mmekorita:
ikori - kpaa, rụkọta ọrụ, ma dezie ndepụta ọrụ na ezigbo oge.
Oru oma - hazie ma hazie ndepụta ọrụ gị iji kwekọọ otu ị si arụ ọrụ.
Wọkspeesi -ebe ọrụ bụ nchịkọta nke ndepụta ma ọ bụ ndetu ị nwere ike ịkpọ ndị ọzọ ka ha sonyere.
ìgwè - ekenye ihe aga-eme, kesaa ihe edeturu, ma lelee otu otu.
Templates - enwere usoro ọrụ ekwughachiri? Buru otu ndebiri nke Taskade iji bulie ọrụ gị elu.
Nke kachasị, Taskade nwere ngwa maka ekwentị mkpanaaka gị iOS na gam akporo, ma ọ bụ Mac ma ọ bụ desktọọpụ Windows gị. Ha arụkwala nnukwu ndọtị maka Chrome na Firefox. Taskade dị ugbu a free - na ụdị Pro na-abịa n'oge adịghị anya.
Banye maka Taskade
Tags: nchọgharị ngwandọtị nchọgharịfree ọrụ ngwá ọrụmobile ngwa ọdịnalaarụpụtaghịndepụta ọrụnjikwa ọrụọrụOru omandebanye ọrụ